Kutsvaga paIndaneti - Kuve wakadhakwa paIndaneti kunogona kuva nezviso zvakawanda
Zviratidzo uye zvikonzero zvekudhakwa kweInternet
Iwe unogona sei kubata mushonga wekutsvaga paIndaneti?
Mwana wangu ari paIndaneti akadhakwa here?
Inotenga inotenga iripo here? Mukutaura, vanhu vanogona kuva vakapindwa muropa nezvose zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo hwezuva nezuva. Kubvira paterevhizheni uye kubva kune doro, fodya kana zvokudya. Zvechokwadi, kubvira panguva ye internet, zvakare.
Kunyanya kunetseka kunowanzozivikanwa pakuti mishonga haigone kurarama kunze kwezvinhu zvinodhaka, mune iyi nyaya Indaneti. Izvi zvinodhaka kuve paIndaneti zvinogona kuva nezviso zvakawanda uye zvakasiyana nevakomana nevasikana. Mumwe wevanomwe vanoshanda paIndaneti mazuva ano anonzi akabatwa nehutachiona ichi. Panguva iyi, kushandiswa kwepakombiyuta kunowanikwa zviri pachena sechirwere.
Kuenzanisa pabonde pabonde
Zvichienderana nechinangwa chekudhakwa kwepakombiyuta, zvimwe zviito zviri mberi. Zvisinei, chokwadi ndechekuti varume vanhurume vanoita zvekutengesa kunotungamirirwa nehurukuro yepamutambo muInternet.
Pasinei nemitambo yemukana kana hondo haina kukosha pano, zvinowedzera pamusoro pehuwandu hunhu hwekutamba pamakombiyuta.
Vakadzi nevasikana vanogona kunge vari paforamu nguva dzose, vachigovera mapuratifomu nekukurukura kwete-stop. Iyo kombiyuta iri kushanda kumativi ose eawa, hapana chinoshanda pasina iyo.
Zvechokwadi, miganhu iri pakati pekutsvaira uye kushandiswa nguva dzose inotanga kusviba, saka unogona kuona kushandiswa kwepakombiyuta kwenguva yakareba saizvozvi. Zvisinei, kana iwe wakagara pakombiyuta kusvikira munguva yeusiku, iwe unorara zvishomanana, uyo anotanga kudya kudya kwake pamberi pekombiyuta, uyo anorega shamwari uye anotora zvakawanda uye achiwedzera kurarama munyika inowanikwa, panzvimbo yezvokwadi, inogona kunge iri muropa yakavhiringidzwa kana pangozi yekuzviita.
Mharidzo yekuverenga - kushandisa smartphones nemakombiyuta
Uyewo kushungurudzika mumuviri kunounza kuvhiringidzika kwepakombiyuta nayo. Mukuwedzera kune zvinetso zveziso zvinogonawo kudzorera kurwadziwa uye kukanganisika kunoitika, zvichibva kune vakawanda vagere. Muviri unotarisirwa unoregererwa zvikuru sekune zvimwe zvinodhaka. Izvi zvinogona kutotanga kusvika pakuregererwa.
Kakawanda mushure mekudhakwa kwepakombiyuta pane imwe chirwere chepfungwa, nokuti kushandiswa kwepakombiyuta haisi chirwere chekuzvimirira. Kushandisa zvinodhaka paIndaneti kunowanzobatanidza nezvirwere zvekuora mwoyo, nezvinetso zvekuzvidya mwoyo nezvimwe zvinetso zvemunhu, chiratidzo cheimwe yezvirwere izvi, sekutaura.
Chinhu chechokwadi chinoratidzika chisingazivikanwi, nyika chete ndiyo inopa kuchengeteka. Kuzvidzivirira kwevashandisi vepaIndaneti, kufanana nevamwe vanovhiringidzika, kunowanzoshaya simba. Kana kombiyuta ichivharwa, kana kuti isingashandisi Indaneti, zviratidzo zvakadai sokutsamwa, kusazvidzora, uye kuora mwoyo kunoonekwa.
Sezvimwe nezvimwe zvose zvinodhakwa, kubvumwa kwekudhakwa kunouya kutanga.
Kunyoresa zvepamusoro kune vanhu vakuru
Kana kambomira yekutsvaga paIndaneti ichizivikanwa uye ichibvumirwa, inowanzobatsira kubvunza nyanzvi yekutsvakurudza chikonzero chechokwadi chemishonga, kureva, chimwe chezvinetso zvepfungwa zvinotaurwa pamusoro apa.
Kana izvi zvichibatwa, hutachiona hwepakombiyuta hunotorawo chigaro chekudzokera. Murwere anofanira kuziva kuti Indaneti haigoni kugadzirisa matambudziko ake.
Pakutanga, inobatsirawo kuderedza nguva yeIndaneti nguva nehanho kuita zvinhu zvezuva nezuva: kumunda, kutora kufamba, kudya kunze, kusangana neshamwari.
Izvi zvinowanzofanira kudzidziswa chaizvoizvo. Mapoka ekuzvibatsira anogona kubatsira zvikuru panguva ino uye mberi.
Zvingave kuti mwana wako anokanganiswa nekudhakwa uku kunogona kuonekwa nemararamiro ari pamusoro apa, zvisinei zvingave zvichitaurirwa kana kune ngozi. Iva wakangwarira uye nyora nguva iyo mwana wako anoshandisa paInternet. Izvozvo chete zvinoreva zvakanyanya.
Kana iwe uchinetseka, kusangana neanyanzvi kunogona kubatsira. Uyezve, iwe unofanirwa kuchengetedza kushandiswa uye kuve nechokwadi chokuti mwana wako ari kuita zvemitambo uye vazhinji vezera rako pamwechete, hongu, pasina Indaneti kushandisa! Ani naani ane hupenyu hwakanaka hwehupenyu haawanzopindwa muropa!
Terevhizheni yevana | Media Internet
Media - Internet Smartphone Mabhuku
Nei mabhuku evana? | Mabhuku ehupenyu
Computer neInternet yeVakatanga
Vana kutsvaga michina | Vana paInternet